Florentino Perez Oo Ka Hadlay Mustaqbalka Goolhaaye Keylor Navas – Gool FM
Tababare Valverde oo ku tilmaamay De Jong inuu yahay xiddiga mustaqbalka, muxuuse ka yiri Griezmann?
RASMI: Atletico Madrid oo la saxiixatay mid ka mid ah xiddigaha kooxda Tottenham
RASMI: Matthijs de Ligt oo ka gudbay tijaabadii caafimaad ee uu u maray kooxda Juventus… + SAWIRRO
Florentino Perez Oo Ka Hadlay Mustaqbalka Goolhaaye Keylor Navas
(La Liga) 22 April 2018 Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa shaaca ka qaaday go’aankiisa kaga aadan mustaqbalka goolhaaye Keylor Navas ee garoonka Santiago Bernabéu.
Wargeyska “AS” ayaa soo xigtay wareysi uu Florentino Perez kaga hadlay mustaqbalka Keylor Navas wuxuuna yidhi: “Real Madrid waxa ay heysataa wax aad u muhim ah, taasoo ah joogitaan saaxiib sida Navas oo kale, sababtoo ah wuxuu Ixtiraan iyo qadarin ka helay dhamaan cid kasta, sababa la xidhiidha wax qabadkiisa kooxda”.
“Waa ku faraxsanahay inaan heysano shabaq ilaaliye sida Keylor Navas oo kale, iyadoo aan loo eegin waxa ay dadku sheegayaan, si adag u shaqeey, islamarkaana waxaad joogi doontaa Madrid sanado badan”.
“Waxaan heysanaa labo koob Champions League ee xiriir ah, laakiin waxaan sidoo kale heysanaa dhiiragalin ku aadan in markii saddexaad aan tartankan ku guuleysan doono, si aan taariikh u sameeno”.
“Inkastoo Bayern Munich ay tahay koox adag, laakiin ciyaartoyda Real Madrid ayaa u dagaalami doona noloshooda, si ay ugu guuleystaan Champions League, waxaan awoodnaa inaan ku guuleysano koobkan markii 13aad, Isku xirnaanta Madrid marna ma go’i doonto, inkastoo ay doonayaan dad badan inay sidaas dhacdo”.
Juventus oo iska diiday saxiixa laacib ka tirsan Barcelona
Miyuu daawaday Ronaldo kulankii Barcelona ay xalay ku guulaysatay Copa del Rey?